Waaberi oo ku guuleysatay tartanka ciyaaraha degmooyinka Gobolka Banaadir | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Waaberi oo ku guuleysatay tartanka ciyaaraha degmooyinka Gobolka Banaadir
Waaberi oo ku guuleysatay tartanka ciyaaraha degmooyinka Gobolka Banaadir
Muqdisho(SONNA) Waxaa Caawa lagu soo gabagabeeyay garoonka Banaadir ee degmada C/casiisee magaalada Muqdisho,tartankaasi oo muddooyinkii dambe si xiiso leh uga soconayey magaalada Muqdisho.
Tartankan oo ay final-kiisa wada ciyaareen labada degmo ee Waaberi iyo Hodan, ayaa wareegii 1-aad ayaa ciyaarta waxay ku soo dhamaatay Waaberi 2-0 Hodan.
Ciyaarta oo ahayd mid aad u xiiso badnayd ayaa waxaa u soo daawasho tagay boqolaal dadweyne ah oo ka kala socoda degmooyinka Gobolka Banaadir.
Markii la isku soo laabtay ayaa kooxda Waaberi waxay dhalisay koolkii 3-aad, balse daqiiqado kadib ayaa kooxda Hodan la timid 1 goal waxaana gebi ahaanba ciyaartaasi ay ku soo dhamaatay Waaberi 3-1 Hodan.
Waaberi ayaa kulankii ugu dambeeyay ee Sami final-ka waxay soo reebtay Degmada Hilliwaa halka Hodan ay soo garaacday Kaaraan.
Kooxda kubadda cagta ee Waaberi ayaa caawa loo caleema saaray horyaalka degmooyinka gobolka Banaadir, waxaana sanadkii hore tartanka degmooyinka gobolka Banaadir ku guuleysatay degmada Boondheere, oo ka qaatay Waabari.
Sikastaba 28-kii Agoosto 2014 ayey aheyd markii degmada Waabari ay finalka la ciyaartay Xamar Weyne, iyadoo Waabari loogu adkaaday 2-0, si lamid ah sanadkii xigay 2015 ayaa waxaa Wabari 1-0 ugu qaaday Boondheere,waana markii saddexaad oo xiriir ah.
Previous articleFaah faahin ka soo baxaysa qarixii ka dhacay Baydhabo
Next articleMareykanka oo faah faahiyay duqeyn lagu dilay horjooge ka tirsan Shabaab
Maamulka Galmudug oo gaaray degaanka Laamo Cali Goodir “SAWIRRO”
Maamulka Galmudug oo ku baaqay joojinta Colaadda Xananbuure ee Galgaduud
Doorashada labo kursi oo Aqalka Sare ka tirsan oo ka dhaceysa Jowhar
Doorashada labo kursi oo Aqalka Sare ka tirsan oo ka dhaceysa...